Krizy Nokleary ao Iran, Ireo Nosy Ao Amin’ny Helodrano Persiana ary Fanampiana Ara-bola Ho An’i Palestina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2017 3:50 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nivory ireo mpikambana maharitra ao amin'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana sy Alemaina hiresaka ny hetsika iraisan'izy ireo anoherana an'i Iran ary lohahevitra mafàna ao amin'ny fampahalalam-baovao sy bilaogy Iraniana ilay antsoina hoe “krizy nokleary”.
Jadi manoratra mikasika ny angovo nokleary sy ny antony hanoherany izany:
“Izaho, amin'ny maha demokraty, mpiaro ny tontolo iainana sy mpomba ny fampandrosoana maharitra dia manohitra ny angovo nokleary. Heveriko fa tsy ny angovo ny olana ao Iran fa ny indostrialy tsy misy fandrosoana. Raha mila herinaratra i Iran, dia tsy maintsy manatsara ny fotodrafitrasa misy fa tsy mividy Chernobyl faharoa …. halako ny mandany vola azo amin'ny solitany tsy ierana amiko … “
Misy fanehoan-kevitra maromaro maneho fomba fijery samihafa ao amin'ny lahatsoratr'i Jedi, amin'ny fiteny Persiana. Hassan namela fanehoan-kevitra manohana ny fitaovam-piadiana nokleary ary milaza fa miaina anaty tontolo maherisetra isika ka ilaintsika ny manana azy ireo mba hiaro ny tenantsika. Mampahatsiahy antsika izy fa firenena naratra i Afganistana taorian'ny ady 30 taona ary nesorina tamin'i Iraka ny fitaovam-piadiana. Nilaza koa izy fa tsy manam-piarovana izy ireo ary avy eo notafihina.
Saba tamin'ny fanehoan-kevitra hafa nilaza fa firenena tokony manan-karena i Iran saingy mieli-patrana ny zava-mahadomelina, ny tsy fananan'asa sy ny fivarotan-tena. Natao handrebireby anao ireo teny faneva (zo nokleary) ireo.
Nilaza i Foad, bilaogera tao amin'ny fanehoan-keviny hoe: “Mofo, ny fahafahana, ny fahasambarana ary ny firaisana ara-nofo.. ireo zavatra madinika ireo no tena zoko, fa tsy ireo olana goavana toy ny angovo nokleary.”
Misy ireo vondrona Iraniana bilaogera izay nanova ny anaran'izy ireo mba hilaza lohahevitra roa:
1-Mangataka amin'ny governemanta izy ireo mba hihenjana amin'ireo firenena Arabo izay miady amin'i Iran mikasika ireo nosy kely telo any amin'ny Oalan'i Persia.
2-Mangataka amin'ny governemanta ihany koa izy ireo mba hanohitra ny fanerena tandrefana momba ny olana nokleary.
Araka ny tati-baovao, hanome 50 tapitrisa dolara ho an'ny manampahefana Palestiniana i Iran. Hojreh, bilaogera mpitondra fivavahana nilaza fa te hahazo ny anjarany amin'ity vola ity izy, amin'ny maha olom-pirenena Iraniana azy. Nilaza koa izy fa tena rikoriko izy raha tsy nanameloka ny fidarohana baomba tao amin'ny moske Shiita any Iraka ireo vondrona Palestiniana.